သင့်အိမ်ထဲမှာ အပင်စိုက်ပျိုးခြင်းကြောင့် ရရှိမယ့် ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများ - Lifestyle Myanmar
Home Health & Beauty သင့်အိမ်ထဲမှာ အပင်စိုက်ပျိုးခြင်းကြောင့် ရရှိမယ့် ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများ
သင့်အိမ်ထဲမှာ အပင်စိုက်ပျိုးခြင်းကြောင့် ရရှိမယ့် ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးများ
လူအများစုက အိမ်ထဲမှာ အပင်တွေထားဖိုို့ ချီတုံချတုံဖြစ်ကြပါတယ်။ တကယ်တော့ အိမ်ထဲမှာ အပင်ထားတာဟာ အံ့သြဖွယ်ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးများကို တကယ်ရရှိစေပါတယ်။ တစ်အိမ်လုံး အပင်တွေချည်းပဲထားသင့်တယ်လို့ ပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ သင့်တင့်တဲ့ ပမာဏနဲ့ အိပ်ခန်းထဲမှာ အပင်သေးသေးလေး တစ်ပင် ထားဖို့ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အပင်က ညဘက်မှာ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ဓါတ်ငွေ့ကို ထုတ်ပယ်ပစ်တာကြောင့် အိပ်ခန်းထဲမှာ အများကြီးထားဖို့ မလိုပါဘူး။ သို့ပေမယ့် အပင်လေးတွေအိမ်ထဲမှာထားရင် တစ်နေ့တာအတွင်းမှာ ပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးလေးတွေ ရှိပါတယ်။
၁။ အပင်တွေက လေထုကိုသန့်စင်စေပြီး အားကောင်းစေပါတယ်
ကျွန်တော်တို့အိမ်တွေမှာ အပင်ထားရှိခြင်းက လေထုကို သန့်ရှင်းစေပြီး အားကောင်းလာစေဖို့ ကူညီပေးပါတယ်။ တစ်နေ့တာအတွင်းမှာ အပင်တွေဟာ ကျွန်တော်တို့ ရှုရှိုက်နေတဲ့ လေကိုညစ်ညမ်းစေတဲ့ ဓါတ်ငွေ့တွေကို စုပ်ယူပါတယ်။ သူတို့က လေထုထဲမှာ စိုထိုင်းဆကို တိုးမြှင့်ပေးပါတယ်။
အပင်တွေက နွေရာသီမှာ ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအေးမြစေနိုင်ပြီး ဆောင်းရာသီမှာ နွေးထွေးစေပါတယ်။
၂။ အပင်တွေက လေ့လာမှုနှင့် အလုပ်ကို ကူညီပေးပါတယ်
အိမ်မှာ အပင်တွေရှိခြင်းက စာကျက်နေတဲ့အခါ၊ အလုပ်လုပ်နေတဲ့အခါ အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ အကူအညီကို ရနိုင်ပါတယ်။ အကြောင်းရင်းကတော့ အပင်တွေဟာ အိမ်တွင်း၊ အိမ်ပြင်က ဆူညံသံတွေကို လျော့ချပေးတာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ပိတ်ထားတဲ့ အခန်းတွေနဲ့ နေရာသေးသေးလေးတွေမှာ သိသာပါတယ်။ သင်ဟာ အိမ်ထဲမှာ စာကျက်နေတာ၊ အလုပ်လုပ်နေတာဆိုရင် အပင်တွေက သင့်ရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုကို သက်ရောက်စေပြီး ပြင်ပက အသံတွေကို ပျောက်သွားစေပါတယ်။
အပင်တွေက သင့်ကို သာယာပြီး စိတ်တည်ငြိမ်စေတဲ့ ခံစားမှု ပေးတာကြောင့် ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူးကောင်းတစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှုလျှော့ချနေချိန်မှာ ပိုပြီးထိရောက်ပါတယ်။
၃။ အိမ်ထဲက ဖုန်မှုန့်တွေကို လျော့ချပေးပါတယ်
သင်နေတဲ့ နေရာပေါ်မှုတည်ပြီး ဒါမှမဟုတ် အချို့သောအခြေအနေပေါ်မှုတည်ပြီး သင့်အိမ်က မကြာခဏ မြန်မြန်ဖုန်တတ်နိုင်ပါတယ်။ နေ့တိုင်းဖုန်တွေ သန့်ရှင်းနေရရင် စိတ်ပျက်စရာဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အပင်တွေက ဒီနေရာမှာ အရမ်းအထောက်အကူပြုပါတယ်။ သင်ယုံလား/မယုံလားတော့ မသိပေမယ့် အပင်တွေက လေထုကိုညစ်ညမ်းစေတဲ့ gases တွေကိုစုပ်ယူပြီး ပတ်ဝန်းကျင်ကို သန့်စင်စေပါတယ်။ ညစ်ညမ်းမှုကိုလည်း လျော့ချပေးပြီး ဖုန်တွေကို ၂၀%လျော့ကျစေပါတယ်။ သင့်မှာ ဖုန်နဲ့ ဓါတ်မတည့်တဲ့ရောဂါရှိရင် ဒါက သင့်အတွက် အရမ်းအရေးပါပါတယ်။
၄။ သင့်ရဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို တန်ဖိုးထားမှုကို တိုးတတ်စေပါတယ်
သင့်အိမ်ထဲမှာ အပင်တွေရှိခြင်းက self-esteem ကိုတိုးတတ်စေနိုင်တယ်ဆိုတာ သင်သိပါသလား?
ဒါကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ သူတို့က အမြင်အာရုံ သက်ရောက်မှု ရှိတာကြောင့် ဖြစ်ပါတယ်။ အပင်တွေရှိတဲ့အိမ်တစ်လုံးဟာ ပိုပြီး သာယာ၊ နွေးထွေးပျူငှာပြီး အိမ်ကိုလည်း လှပကြည့်ကောင်းစေပါတယ်။ ဒါက သင့်ရဲ့စိတ်နဲ့ self-esteem ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေပါတယ်။
ဒါပေမယ့် အပင်တွေကို ဂရုစိုက်ပေးဖို့လိုပါတယ်။ သူတို့လိုအပ်တဲ့ ရေကိုလောင်းပေးဖို့လိုသလို၊ လိုအပ်တဲ့အခါ အိုးထဲကို ပြောင်းရွေ့စိုက်ပေးဖို့လိုပါတယ်။ အပင်စိုက်ရတာ ပျော်စရာကောင်းသလို သင့်ကျန်းမာရေးနှင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကို တန်းဖိုးထားမှုကို ဂရုစိုက်ဖို့ ကူညီပေးပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် စိတ်ခံစားမှုပိုကောင်းစေဖို့ သင့်အိမ်မှာ အပင်လေးတွေ စိုက်ထားသင့်ပါတယ်။
၅။ သင့်အိမ်မှာ အပင်လေးတွေနဲ့ ပျော်မွေ့ပါ
သင့်အိမ်မှာ အပင်လေးတွေရှိပါသလား? စိတ်ညစ်နေတဲ့အချိန်မှာတောင် စိမ်းစိမ်းစိုစို အပင်လေးတွေက စိတ်ချမ်းသာမှုကို ပေးပါတယ်။အပင်လေးတွေက ဂရုစိုက်မှုနှင့် တာဝန်ယူမှု အများကြီး လိုအပ်တာကြောင့် ဂရုစိုက်မှုမပေးနိုင်ဘူးဆိုရင် အများကြီး ဂရုစိုက်စရာမလိုတဲ့ အပင်လေးတွေရွေးချယ်ပါ။ သင့်အိမ်မှာ အပင်လေးတွေ ရှိပြီးသားဆိုလျှင် စနစ်တကျ ဘယ်လိုဂရုစိုက်ရမလဲဆိုတာ လေ့လာပါ။ မဝယ်ခင်ကတည်းက မေးမြန်းပါ။
သငျ့အိမျမှာ အပငျစိုကျပြိုးခွငျးကွောငျ့ ရရှိမယျ့ ကနျြးမာရေးအကြိုးကြေးဇူးမြား
လူအမြားစုက အိမျထဲမှာ အပငျတှထေားဖို့ ခြီတုံခတြုံဖွဈကွပါတယျ။ တကယျတော့ အိမျထဲမှာ အပငျထားတာဟာ အံ့သွဖှယျကနျြးမာရေး အကြိုးကြေးဇူးမြားကို တကယျရရှိစပေါတယျ။ တဈအိမျလုံး အပငျတှခေညျြးပဲထားသငျ့တယျလို့ ပွောတာမဟုတျပါဘူး။ သငျ့တငျ့တဲ့ ပမာဏနဲ့ အိပျခနျးထဲမှာ အပငျသေးသေးလေး တဈပငျ ထားဖို့ပဲ ဖွဈပါတယျ။
အပငျက ညဘကျမှာ ကာဗှနျဒိုငျအောကျဆိုဒျဓါတျငှကေို့ ထုတျပယျပဈတာကွောငျ့ အိပျခနျးထဲမှာ အမြားကွီးထားဖို့ မလိုပါဘူး။ သို့ပမေယျ့ အပငျလေးတှအေိမျထဲမှာထားရငျ တဈနတေ့ာအတှငျးမှာ ပေးစှမျးနိုငျတဲ့ ကနျြးမာရေး အကြိုးကြေးဇူးလေးတှေ ရှိပါတယျ။
၁။ အပငျတှကေ လထေုကိုသနျ့စငျစပွေီး အားကောငျးစပေါတယျ
ကြှနျတျောတို့အိမျတှမှော အပငျထားရှိခွငျးက လထေုကို သနျ့ရှငျးစပွေီး အားကောငျးလာစဖေို့ ကူညီပေးပါတယျ။ တဈနတေ့ာအတှငျးမှာ အပငျတှဟော ကြှနျတျောတို့ ရှုရှိုကျနတေဲ့ လကေိုညဈညမျးစတေဲ့ ဓါတျငှတှေ့ကေို စုပျယူပါတယျ။ သူတို့က လထေုထဲမှာ စိုထိုငျးဆကို တိုးမွှငျ့ပေးပါတယျ။
အပငျတှကေ နှရောသီမှာ ပတျဝနျးကငျြကိုအေးမွစနေိုငျပွီး ဆောငျးရာသီမှာ နှေးထှေးစပေါတယျ။
၂။ အပငျတှကေ လလေ့ာမှုနှငျ့ အလုပျကို ကူညီပေးပါတယျ
အိမျမှာ အပငျတှရှေိခွငျးက စာကကျြနတေဲ့အခါ၊ အလုပျလုပျနတေဲ့အခါ အလှနျအစှမျးထကျတဲ့ အကူအညီကို ရနိုငျပါတယျ။ အကွောငျးရငျးကတော့ အပငျတှဟော အိမျတှငျး၊ အိမျပွငျက ဆူညံသံတှကေို လြော့ခပြေးတာကွောငျ့ ဖွဈပါတယျ။ အထူးသဖွငျ့ ပိတျထားတဲ့ အခနျးတှနေဲ့ နရောသေးသေးလေးတှမှော သိသာပါတယျ။ သငျဟာ အိမျထဲမှာ စာကကျြနတော၊ အလုပျလုပျနတောဆိုရငျ အပငျတှကေ သငျ့ရဲ့အာရုံစူးစိုကျမှုကို သကျရောကျစပွေီး ပွငျပက အသံတှကေို ပြောကျသှားစပေါတယျ။
အပငျတှကေ သငျ့ကို သာယာပွီး စိတျတညျငွိမျစတေဲ့ ခံစားမှု ပေးတာကွောငျ့ ကနျြးမာရေးအကြိုးကြေးဇူးကောငျးတဈခုလညျး ဖွဈပါတယျ။ စိတျဖိစီးမှုလြှော့ခနြခြေိနျမှာ ပိုပွီးထိရောကျပါတယျ။
၃။ အိမျထဲက ဖုနျမှုနျ့တှကေို လြော့ခပြေးပါတယျ
သငျနတေဲ့ နရောပျေါမှုတညျပွီး ဒါမှမဟုတျ အခြို့သောအခွအေနပေျေါမှုတညျပွီး သငျ့အိမျက မကွာခဏ မွနျမွနျဖုနျတတျနိုငျပါတယျ။ နတေို့ငျးဖုနျတှေ သနျ့ရှငျးနရေရငျ စိတျပကျြစရာဖွဈလာနိုငျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အပငျတှကေ ဒီနရောမှာ အရမျးအထောကျအကူပွုပါတယျ။ သငျယုံလား/မယုံလားတော့ မသိပမေယျ့ အပငျတှကေ လထေုကိုညဈညမျးစတေဲ့ gases တှကေိုစုပျယူပွီး ပတျဝနျးကငျြကို သနျ့စငျစပေါတယျ။ ညဈညမျးမှုကိုလညျး လြော့ခပြေးပွီး ဖုနျတှကေို ၂၀%လြော့ကစြပေါတယျ။ သငျ့မှာ ဖုနျနဲ့ ဓါတျမတညျ့တဲ့ရောဂါရှိရငျ ဒါက သငျ့အတှကျ အရမျးအရေးပါပါတယျ။
၄။ သငျ့ရဲ့ ကိုယျ့ကိုယျကို တနျဖိုးထားမှုကို တိုးတတျစပေါတယျ
သငျ့အိမျထဲမှာ အပငျတှရှေိခွငျးက self-esteem ကိုတိုးတတျစနေိုငျတယျဆိုတာ သငျသိပါသလား?
ဒါကဘာဖွဈလို့လဲဆိုတော့ သူတို့က အမွငျအာရုံ သကျရောကျမှု ရှိတာကွောငျ့ ဖွဈပါတယျ။ အပငျတှရှေိတဲ့အိမျတဈလုံးဟာ ပိုပွီး သာယာ၊ နှေးထှေးပြူငှာပွီး အိမျကိုလညျး လှပကွညျ့ကောငျးစပေါတယျ။ ဒါက သငျ့ရဲ့စိတျနဲ့ self-esteem ကိုပိုမိုကောငျးမှနျစပေါတယျ။
ဒါပမေယျ့ အပငျတှကေို ဂရုစိုကျပေးဖို့လိုပါတယျ။ သူတို့လိုအပျတဲ့ ရကေိုလောငျးပေးဖို့လိုသလို၊ လိုအပျတဲ့အခါ အိုးထဲကို ပွောငျးရှစေို့ကျပေးဖို့လိုပါတယျ။ အပငျစိုကျရတာ ပြျောစရာကောငျးသလို သငျ့ကနျြးမာရေးနှငျ့ ကိုယျ့ကိုယျကို တနျးဖိုးထားမှုကို ဂရုစိုကျဖို့ ကူညီပေးပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့ စိတျခံစားမှုပိုကောငျးစဖေို့ သငျ့အိမျမှာ အပငျလေးတှေ စိုကျထားသငျ့ပါတယျ။
၅။ သငျ့အိမျမှာ အပငျလေးတှနေဲ့ ပြျောမှပေ့ါ
သငျ့အိမျမှာ အပငျလေးတှရှေိပါသလား? စိတျညဈနတေဲ့အခြိနျမှာတောငျ စိမျးစိမျးစိုစို အပငျလေးတှကေ စိတျခမျြးသာမှုကို ပေးပါတယျ။အပငျလေးတှကေ ဂရုစိုကျမှုနှငျ့ တာဝနျယူမှု အမြားကွီး လိုအပျတာကွောငျ့ ဂရုစိုကျမှုမပေးနိုငျဘူးဆိုရငျ အမြားကွီး ဂရုစိုကျစရာမလိုတဲ့ အပငျလေးတှရှေေးခယျြပါ။ သငျ့အိမျမှာ အပငျလေးတှေ ရှိပွီးသားဆိုလြှငျ စနဈတကြ ဘယျလိုဂရုစိုကျရမလဲဆိုတာ လလေ့ာပါ။ မဝယျခငျကတညျးက မေးမွနျးပါ။
Previous articleသင့်ရဲ့ဖက်ရှင်အမြင်ကို လူတိုင်း အားကျအတုယူစေနိုင်တဲ့ ဖက်ရှင်သိကောင်းစရာ (၁၀)ခု
Next articleကိုယ့်ဘက်က အကောင်းဆုံးပေးဆပ်ပြီး ချစ်ခဲ့ပေမဲ့ လမ်းခွဲသွားတဲ့ အကြောင်းအရင်း